Global Voices teny Malagasy · 20 Jona 2013
20 Jona 2013
Tantara tamin'ny 20 Jona 2013
Azia Atsinanana20 Jona 2013
Tena fitaovana mahomby ho an'ireo mpitondra any Atsimo Atsinanan'i Azia tokoa izao ny Twitter. Ny Filohan'i Indonezia Susilo Bambang Yudhoyono izay 2.4 tapitr'isa ireo mpanaraka azy ao no malaza indrindra amin'ireo mpitondra any amin'ny faritra. Etsy ankilany, ilay Praministra Maleziana Najib Razak,dia mbola malaza be ihany any amin'ny fireneny, ary...
#BarHeaven Sy Ny Olana Mikasika Ireo Olona Tsy Hita Popoka Tao Meksiko
Nanao fanambaràna ampahi-bemaso mikasika ny fanjavonan'ireo olona 26.121 ny biraon'ny LEhiben'ny Fampanoavana ao Meksika. Anarana raika ambiny folo izany izao no hamenoana ny lisitra taorian'ny fanjavonan'izy ireo tao amin'ilay trano fisotroana "Heaven" tao an-tananàn'i Meksiko.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Jona 2013
Hiverina eny amin'ny tahakala voaloko indray ny Ejipsiana, mandrafitra fihetsiketseha-panoherana “handrodanana ny fitondrana” amin'ny 30 jona. Ny daty izay mivezivezy any amin'ny tambajotran-tserasera amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #June30 no manamarika ny tsingerintaona voalohany nitondran'ny filoha Mohamed Morsi, kandidàn'ny Mpirahalahy Miozolomana, izay voafidy taorian'ny fihetsiketseham-bahoaka nanomboka tamin'ny 25 Janoary 2011 ary...